Career - Myanmar Insurance %
by admin | Mar 23, 2020 | news category
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားတွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ကူးစက်မြန် COVID19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါက ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်၊ ကုသနိုင်ရန်အတွက် ဝေဘာဂီ အထူးကုဆေးရုံကြီးနှင့် ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးတို့တွင် အရေးပေါ် လိုအပ်နေသော ငွေကျပ် သိန်း(၁၀၀၀)...
Dai-ichi Life Insurance ကုမ္ပဏီသည် ၁၉၀၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ဂျပန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် အသက်အာမခံ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၅ သောင်းကျော်ဖြင့် ဖွဲစည်းထားသော အသက်အာမခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယန်း ၃၇၀၄၆ ဘီလီယံ...
Novel Corona Virus is still spreading and difficult to control in many countries - here are 13 things that suggested by AIA, the world's largest Life Insurance Company. Personal Care 1. WearaMask and Outsurface the green colour then put on top the Metal. 2. Cover...
by admin | Feb 21, 2020 | news category
Event : Deputy Minister of Finance and veteran insurance specialist will moderate talk on Insurance from Legal Point of View at Chamber of Commerce.
AYA Financial Group ၏ ၂၀၂၀ နှစ်သစ်အကြို အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ရက်နေ့ ညနေက ရန်ကုန်မြို့ ရှိ Novotel Hotel ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုအခမ်းအနားကို အထူးဖိတ်ကြားထားသော နိုင်ငံတကာသံတမန်မိသားစုများ၊ စီးပွားဖက် မိတ်ဖက်များနှင့် အနုပညာရှင်များ တက်ရောက်ကာ...
GGI has been one of Myanmar's most trusted insurance companies since 2013. GGI is joint venture with two biggest insurance company in Japan insurance market not just only one. Tokio Marine and Nippon Life the two partner will introduce to insurance...
Today's news is about the partnership with AIA Myanmar and AYA Financial Group, Max Myanmar Group, one of Myanmar's largest and most successful business groups in the Myanmar Insurance sector, today. This partnership will enable the people of Myanmar to...